Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo | MyWeedSeeds.com
Unogona kutumira kune nyika yangu?
Zvinotora nguva yakadii kuti odho isvike?
Ini ndinowana mbeu ngani pachigadzirwa?
Zvakadiniko nezvipo zvakakosha?
Unogona kunditumira rimwe sora kana hashish kubva kune kofieshop?
Ndinokutaurira sei iwe?
Une katarogu here?
Une chitoro here?
Vanowanzo Bvunzwa Mibvunzo
Pano iwe unowana inowanzo bvunzwa mibvunzo nevatengi vedu. Kana mubvunzo wako usati wapindurwa, ndapota taura nesu kuburikidza ne kuonana chimiro.
Ndiri kugara muUS, Australia, China, Caribbean, Turkey, Greece etc.
EHE! Isu tinotakura pasirese! Mbeu dzeMarijuana dzakanyatsotenderwa muNetherlands. Ivo havaonekwe pane runyorwa rweDutch Opium Act. Nepo mbeu yembanje pamwe zviri pamutemo muNetherlands, izvi ndizvo zvimwe zvinorambidzwa kune dzimwe nyika. Nekuti hazviite kuti titarise mutemo wega wega wepasi pano, ndapota tarisa mitemo yako yemuno nezvekutambira mbanje / genetics munyika yaunogara. Tarira! Kana chigadzirwa chedu chakarambidzwa munyika yako funga kuti chigadzirwa chacho chinogona kutorwa nevakuru vemunharaunda uye hapazove nekudzoserwa.
Kana, unogona kufonera Visa kana Mastercard uye uti "Ndokumbirawo mubvumire kutengeserana kwepamhepo kubva kuEurope". Sezvo izvi zvichizovharwa kudzamara vawana mvumo yako.
Chii chakaita sepakeji?
Yese mirairo yakarongedzwa zvine hungwaru. Iko hakuna chinongedzo kune izvo zvirimo zvepakeji. Iye anotumira haana hukama nemishonga.
Isu tinotakura iwo mapasuru kuburikidza neDutch posvo kubva kuNetherlands. Iyo nguva yekuuya yeodha yako inogona kusiana kubva kwauri kuenda kuenda. Ivhareji odha inotora angangoita matatu kusvika kumazuva ebhizinesi gumi nemaviri kusvika muEurope. KuUS, Australia neAsia, izvi zvinogona kutora pakati pe3 kusvika kumazuva makumi maviri neshanu ebhizinesi.
AIHWA! Hazvisi pamutemo kwatiri kutumira masora kana hashish kunze kweHolland.
Iwe unogona kutitumira meseji ine bhatani rekubata mune yepamusoro kana yepasi pekufamba bar.
Isu tiri boka revatombo vakatsaurira hupenyu hwedu kuunganidza, kuberekesa nekuparadzira mbeu kutenderera pasirese, nekuti isu tinotenda kuti munhu wese ane mvumo yekuyedza runako rwaAmai Rakasununguka nekuda kwekudzidzisa, kwekurapa kana kwekuvaraidza zvinangwa. Isu tinomhanya iyi yembeu yembeu kweanoda kusvika makore gumi. Tine vatengi vazhinji vanofara pasi rese vanofadzwa nebasa redu rakanaka.
Kwete, webhusaiti yedu ndiyo katarogu yedu. Iwe unogona kushandisa iyo yekudhindisa bhatani mune yekugovana widget kupurinda peji rauri kufarira mairi.
Chitoro chega chatinacho ndeye online webshop. Izvi zviri mukubatsira kwako, nenzira iyi tinogona kuchengetedza zvigadzirwa zvemitengo zvakaderera.